Akaiky ny fotoana hialan'ny Fanahy
Ny Fanahy sy ny ampakarina manao hoe: Avia; ary aoka izay mahare hanao hoe: Avia. Ary aoka ho avy izay mangetaheta; ary izay mety, aoka izy hisotro maimaimpoana amin’ ny ranon’ aina. Apôk.22:17.
Tsy haharitra ela intsony ny fotoana fizahan-toetra. Nanaisotra ny tanany tsy ho ety an-tany Andriamanitra. Naharitra ny nitenenana ny tamin' ny olona tamin'ny alalan'ny fiasan'ny Fanahiny Masina; kanefa tsy rototra izay tamin'ny antso izy ireo. Ankehitriny miteny amin'ny vahoakany Izy sy amin'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fitsarana. Androm-pahasoavana ho an ireo tsy nanana tombon-tsoa handre ny fahamarinana ny androm-pitsarana. Amim-pahalemen-panahy no hijeren'ny Tompo azy ireo. Tohina ny fony feno famindrampo; mbola mitsotra hamonjy ny tanany. Maro no isan'ireo ekena ho isan'ny andian' ondry azo antoka amin'izao andro farany izao izay sambany no handre ny fahamarinana.
Miantso ireo mino Azy ny Tompo ho mpiara-miasa Aminy. Raha haharitra ny andro iainana, dia tsy hahatsapa izy ireo fa efa vita ny asany. Hiandry ny famantaran'ny andro farany ho tanteraka ve isika ka tsy hanambara amin'ny olona izay ho tonga ety ambonin'ny tany? Avelantsika hivarina any amin'ny maizina ve izy ireo, ka tsy hampirisihina amin'ny filàna ny fiomanana hihaona amin'ny Tompony? Raha tsy manao ny adidintsika amin'ireo manodidina antsika isika, dia ho tonga tahaka ny mpangalatra ny andron'Andnamanita. Ho feno fisavoritahana izao tontolo izao, ary ho tonga tsy ho ela amin'ny olona ny horohoro lehibe. Tena akaiky ny farany. Isika izay mahalala ny fahamarinana dia tokony hiomana amin'izay hiseho, mahatsiravina, tsy ho ela sy tsy ampoizina amin'izao tontolo izao.
Amin'ny maha-vahoakan' Andriamanitra antsika dia tsy maintsy manomana ny lalan' ny Tompo isika, eo ambany fanapahana sy fitarihanny Fanahy Masina. Tokony ho torina amin'ny fahadiovany ny filazantsara. Tokony ho lalina sy hivelatra ny rano velona mikoriana. Any amin' ny toerana lavitra, dia misy olona antsoina handao ny fangady tarihina sy raharaham-barotra, . ary hiofana amin'ny fikasohany amin'ireo olon'ny fanandramana. Rehefa mianatra hiasa amim-pahombiazana izy ireo, dia hitory ny fahamarinana amin-kery. Amin'ny alalan'ny fiasan'ny fitantanan'Andriamanitra dia hiala ny tendrombohitry ny olana.
Ny hafatra izay manana ny maha-izy azy ho an'ny mponina ety an-tany dia ho re sy ho azo. Hahafantatra ny fahamarinana ny olona. Handroso ary tena handroso ny asa, mandra-pahatonga ny tany rehetra handre ny fampitandremana. Ary dia ho tonga ny farany.